Caadada - Youmo
Mens - somaliska
Caadadu waxa weeye dhiig ka yimaada ilmo galeenka oo ka soo baxa siilka qiyaas ahaan hal mar bishiiba.
Waxa inta badan u dhaxeysa afar todobaad inta caadada kale kaa imaan doonto. Laakiin bilowga horeeya ee caadada la helaayo ayay dhici kartaa in intaas wakhti ka badan ama ka yar uu u kala dhaxeeya caadooyinka.
Dadku waa ay ku kala duwan yihiin dhererka wakhtiga uu dhiiggu ka socdo. Marka dhiig badani kaa baxaayo ayuu midabka dhiiggu casaan yahay iyadoo ay caadada xinjiro la socon karaan. Caadadu markey kaa soo dhamaaneyso ayaa dhiigu inta badan yahay mid bunni cas ah oo qalalan. Waxa caadi ah in dhiigu 3 ilaa 7 maalmood socdo.
Dadka intooda badan waxay caadadooda ugu horeysa helaan da'da 12-14 sanno jirka. Dadka qaar ayaa hela marka ay yihiin 9 ama 16 sanno jir. Haddii aanad helin caadada markaad 16 sanno jir gaadho, la soo xidhiidh skolsköterskan ama ungdomsmottagning
Waa caadi ah in bilowga caadada ay calooshu ama dhabarku ku xanuuno. Dadka qaar ayaa xanuun badan dareema. Xanuunka caadadu ma aha wax khatar ah.
Halkan waxa ku yaala dhowr waxyaalood oo aad sameyn karto si aad u dhinto xanuunka:
Usoco sida aad jeceshay, tusaale ahaan guclee, lugee ama dheel ciyaarta qoobka ciyaarka.
Wax diiran saar meesha ku xanuuneysa.
Marka xanuunka caadadu kugu bilowdo qaado kiniinka xanuunka jabiya ee warqad la'aanta lagu soo iibsado.
Hadaad aad caadada ka hor xanuunsaneyso
Waa caadi in murugo ama xanaaq la dareemo maalmaha ka horeeya caadada. Taas waxa loo yaqaanaa PMS. Sidan ayuu dareenka PMS noqon karaa.
Waad cadhooneysaa ama si dhibyar ayaad u ooyi kartaa.
Waxa ku xanuunaaya naasaha.
Waxaad ka gaajo badan tahay sida caadiga.
Waxaad taas ka soo roonaataa marka ay caadadu kaa timaado. Waxa ku caawi kara haddii aad is dejiso oo aad si wanaagsna wax u cunto. Waxa sidoo kale wanaagsan inaad dhaqdhaqaaqdo.
Waxaad heli kartaa caawimo haddii wax caadadu ku lug leh uu ku dhibaayo.
Marmarka qaarkood ayaad caawimo uga baahan kartaa wax caadadaada ku lug leh. Waxaad la soo xidhiidhi kartaa skolsköterskan, ungdomsmottagning ama vårdcentral. Waxyaabahan ayaa lagaa caawin karaa:
Haddii aad aad u dhiigeyso/dhiig baxdo. Markaa ayaa heli kartaa wax kaa caawiya si dhiig yar kaaga yimaado.
Dhiigii ayaa istaagey inuu yimaado. Waxa lagaa caawimayaa si loo ogaado sababta.
Waxaa ku haya xanuun badan, ama xoog ayaad ugu xanuunsanaysaa caadada. Waxaad heli kartaa daawo warqad laguugu qoro oo kaa caawisa.
Waxaad doonaysaa inaad bedesho xiliga caadada ama inaad dhamaanba iska wada joojiso. Markaas waa lagaa caawin karaa taas.
Waxyaala la iskaga dhowro caadada
Waxa jira afar shay oo aad soo iibsan karto oo dhiiga caadada la iskaga ilaaliyo: binda, trosskydd, tampong iyo menskopp. Dhamaantood marka laga reebo menskopp waxa laga heli karaa tukaamada cuntada, kiosk-yada iyo farmasiiyada. Menskopp-ka waxa laga iibsan karaa internedka iyo farmasiiyada qaarkood.
Binda-du waxay nuugtaa dhiiga. Waxaad bindan saareysaa nigiska. Dhinaca ayay xabag bidan kaga dheggan tahay meesha ku haysa. Wuxuu leeyahay qiyaaso kala duduwan. Dumarka intooda badan waxay maalmaha hore ee caadada bedbedelaan binda-da marar badan. Bindan waxay bilaabi karta inay urto ama uu dhiigu ka soo da'o haddii aad wax badan deyso.
Trosskydd waa sida binda-da laakiin waa ay ka yar tahay. Waxaad isticmaali kartaa marka ay caadadu kaa sii dhamaaneyso ee wax yar oo dhiig ahi kaa socdaan. Dadka qaar ayaa xidhha trosskydd marka ay xidhan yihiin tampong, si aanu dhiigu nigiska uga soo gaadhin haddii uu tampongen buuxsamo.
Tampong waxaad galineysaa siilka. Waxa uu nuugayaa dhiiga si aanu u soo bixin. Waxaad qubaysan kartaa ama isboorti ciyaari kartaa adigoo xidhan tampong.
Wuxuu leeyahay qiyaaso kala duduwan. Dooro tampong ka weyn haddii wax badan aad dhiigeyso. Waxaad isticmaali kartaa tampong xataa haddii aanad waligaa galmo sameyn.
Marka ugu horeysa ee aad isticmaalayso, waa inaad taas sameyso xiligga aad leedahay dhiig badan, maxaa yeelay markaas ayay si ka dhibyar u dhex sibaaxeysaa. Dooro markaa tampong yar. Waxa uu si ka dhibyar ugu galayaa haddii aad kadaloob u fadhido oo aad lugahana kala furto.
Gacmaha dhaq oo qalaji.
Ka saar balastiga ku waregsan tampongen.
Waxa weeye dhinaca aanu ku oolin xadhigu, xagga galaysa afka siilka.
Ku kala fur dabnaha siilka gacanta kale ee aanad ku haynin tampongen.
Hel afka siilka oo dabadeedna gali tampongen.
Siilku waxa uu u janjeedaa dhinaca gadaasha, markaa waa in tampongen loo galiyo janjeedh. Waa ay cidhiidhyi kartaa wax yar, laakiin ma jiraan wax sinaba u dhaawacmaaya.
Tampongen waxa uu galayaa siilka gudahiisa hore. Xadhiga waa in uu dibada ka soo laalaado. Tampongen waa in aan la dareemin. Haddii aad dareento ayuu ku jiraa meel gudaha hoose ah. Isku dey inaad sii yara riixdo. Iskeed iskama soo bixi karto, jidhkana kuma dhex lumi karto.
Imisa jeer ayaan badalayaa tampongen?
Bedel tampongen marka aad is tidhaa waxa ka buuxsamey dhiig. Markaas ayuu si dhibyar u soo jibaaxayaa haddaad soo jiido xadhiga. Haddii uu aayar sacdo, ayay u badan tahay inuu qalalan yahay oo aan markaa loo baahneyn in la badelo.
Marka aad soo saarto tampongen, ku laalaab warqada musqusha oo ku tuur baaldiga qashinka.
Waxaad adigu tampong xidhan kartaa habeenkii. Gali marka aad seexanayso, kadibna degdeg u bedel marka aad soo toosto. Waad qubaysan kartaa adigoo xidhan tampong. Bedel marka aad dhameysato qubeysiga.
Miyaa tampong ku dhagi karaa?
Ma dhacdo caadi ahaan inaan la soo saari karrin tampongen. Si kadaloob ah u fadhiiso oo gali hal far. Qabo xadhiga ama tampongen kadibna soo jiid. Waxaad adigu caawimo ka heli kartaa umuliso joogta ungdomsmottagning haddii aad soo saari kari weydo tampongen.
Waxa menskopp laga sameeyey caag jilicsan iyada oo markaa ku hayn karro dhowr sanno.
Waxaad galineysaa siilka iyadoo dhiigu galaayo jidhka. Menskoppen waxa uu qaadaa dhiig ka badan binda-da iyo tampong-en.
Waa lagu qubeysan karaa menskopp-ka.
Dhinaca balaadhan ayaa marka hore galaaya. Waxa uu si ka dhibyar ugu galayaa haddii aad kadaloob u fadhido oo aad lugahana kala furto.
Ku kala fur dabnaha siilka gacanta kale ee aanad ku haynin menskoppen.
Waa inaad farta ku dareento usheeda, laakiin waa inaanay dibad uga soo jeedin.
Si aad u soo saarto ayaad soo jiidaysaa usha. Dhiiga waxaad ku qubeysaa musqusha. Koobka ku dhaq saabuun iyo biyo kulul. Laba ilaa afar jeer maalintii ayaa ku filan in la faaruqiyo.
Halkan ayaad ka akhriyi kartaa waxyaalo ku sabsan hoosta hablaha.
Kani waa filim ka socda RFSU.
Caado-xanuunku waa inuusan caqabad kugu noqon!
MawduucWaa maxay caadadu?
Muuqaalka ayaad ku ogaanaysaa waxa jidhka ku dhacaaya markaad caadada hesho.